20ka Bishan oo la filayo Kismaayo in uu ka furmo Shirka Maamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo | Saadaal Media	Wednesday, March 12th, 2014	Home
20ka Bishan oo la filayo Kismaayo in uu ka furmo Shirka Maamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo
Dec 12, 2012 - 11 Jawaabood	ShareWaxaa wali ka soconaya Magaalada Kismayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose shirar balaran oo looga arin sanayo Maamulka lo samaynayo deegaanada Jubooyinka kaasoo siwayn qaban qaabadiisa looga dareemayo gudaha Magaalada Kismaayo.
Shirar isdaba Jooga oo yeelanayaan gudiga Farsamada Maamul u samaynta deegaanada Jubooyinka iyo Gedo iyo qaar kamid ah wax garadka Magaalada Kismaayo iyo deegaanada u dhow dhow ayaa saacadihii ugu danbeya si xowli ah oga soconaya gudaha Magaalada Kismaayo.
Saraakiil ka tirsan Ururka Raaskambooni oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegay in meel gabo gabaa uu marayo la tashayadii lala samaynayay Beelaha Soomaaliyeed ee daga Jubooyinka dhawaana uu furmi doono shirkii .
Mid kamid ah gudiga Farsamada Maamul u samaynta Jubooyinka iyo Gedo oo la hadlay Saadaal Media ayaa sheegay 20 bishan aynu ku jirno in uu furmi doono shirku isla markaasina ay hada inta badan beelaha la kulmeen kana dhaadhiciyeen qaabka maamulka loo samaynayo iyo sida awoodiisa loo qayb sanayo.
Warar hoose oo helayno ayaa sheegaya beelaha qaar in ay ku doodanayaan dhamaanba marka laga xoreeyo deegaanada Jubooyinka iyo Gedo Al-shabaab in maamulka la sameeyo, waxaana suura gal ah arintaasi inaysan dhicin oo maamulka loo sameeyo degaanada iminka gacanta ugu jira Huwanta.
Isku soo wada duuboo dhaq dhaqaaqyada Maamulka loogu samaynayo Jubooyinka iyo Gedo ayaa siwayn looga dareemayaa guud ahaan gobolada Jubooyinka iyo Gedo, waxaana saacadihii ugu danbeeyay gaarayay Magaalada Kismayo Wufuud ka socota IGAD iyo gudiga Farsamada.
Wiixi kusoo siyaada kala soco Wararkeena danb Insha allah
Aadan says:	December 12, 2012 at 5:07 pm	Aad ayaan ugu faraxsanahay shirka kismaayo ka furmayo magaaladayda, waad ku mahadsantihiin bahda saadaal soo gudbinta xogta dhabta ah ee kismaayo iyo maamulka loo samaynayo
Reply »	beesha sade says:	December 12, 2012 at 5:10 pm	Kkkkkkk shirkaan waxa kasoo baxa waan sugaynaa
Reply »	maxamuud says:	December 12, 2012 at 5:11 pm	Shirka kismaayo ka socda guul baan u rajaynaynaa mid mira dhala allaha ka dhigo
Reply »	jaamac says:	December 12, 2012 at 5:13 pm	Mareexaan aayahiisa haka tashto ayaan leeyahay ogaden waxxba uma hayee
Reply »	magan says:	December 12, 2012 at 8:28 pm	Mashaalah waanu tageersanahay dhisida maamul gobaleedka jubbaland
Reply »	maryam says:	December 12, 2012 at 9:16 pm	Jubbalnd dhisideeda waa muqdas awalba dowlada Xamar fadhida ayaa loo xanibnaa iyadana waa ogolaatay marka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo hirgaliyaa
Reply »	Ali says:	December 12, 2012 at 9:27 pm	Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Warbaahinta Saadaal oo naga haqabtirtay wararka dalka gaarahaan jubooyinka ,waad mahadsantihiin
Reply »	caabudwaaq says:	December 13, 2012 at 12:45 am	Mareexaan dadkii Gedo iyo caabudwaaq ka dhigey lama dagaanka 21 sano ay jirtey dowlada soomaaliya ee dhexe oo kala dagaaley horumarka gabolkooda. xamarna maal galeyey oo dadkoodii lumiyey. Maanta yenya mareexaan iska horkeenin. oo aan jifo laysku dilin. Dadka aqoonyahana ah, wax garadka ah waxey taageersan yihiin Jubbaland si aan kala har lahayn. maanta weydhamaatey warlord ama qabqable dagaal oo meel ka qaylinaya. Horumrka sade waxuu ku jiraa Jubabaland.
Reply »	Yaabow says:	December 13, 2012 at 3:25 am	Waxaa cajiib ah in Hal beel ku hamiso inay xukunto Beelaha kale ee la degan Gobolada Labada Jubba iyo Gedo. War isku xishooda. Jubbaland wax la dhaho majiraan. Waayo qabaailka degan badankooda ma taagersana.
Gedo markaan kahadlo waxay u qeybsantaa 7 Degmo, sidaan ayaana loogu kala badan yahay: Baardheere oo ugu weyn waxaa u badan Digil Mirifle, Luuq oo soo raacda waxaa u badan Digil mirifle, Ceelwaaq Digil Mirifle, Buurdhuubo Digilmirifle. Baladxaawo waxaa u badan Darood, Doolow Daarood iyo Garbahaarey Daarood.
Jubbada Dhexe: Sidaan ayaan la iskula degan yahay: Jilib oo aha tan ugu Weyn waxaa u badan Jareerweyne, Sheegaal iyo Digilmirifle, Bu’aale waxaa u badan Digil Mirifle, Saakow Digil Mirifle, Dajuuma Digil Mirifle.
Jubbada Hoose: Kismaayo waxaa u badan Giir Giir ( oo ka kooban Soomali oo dhan), Jamaame waxaa u badan Jarerweyne, Afmadow Darood, badhaadhe Daarood.
Marka waxaa wax lagu qoslo ah in Hal beel keli ay sheegato xaqa Maamul dhisida Goboladaan. War isku Xishooda Umadda Dagaal kale ha u horseedina. Maamul loo wada dhanyahay aan sameysano, caasimada Dalkana aan isku imaano. Hadii kale qof walba Dagmaduu u bato ha maamusho. Kismaanyana Soomaali oo dhan haka dhaxeyso. Waayo Baajun ma hubeysana. Asal dadkaasa iska lahaa. Waa hadii Rabbi laga baqo.
Reply »	Jubbalnder says:	December 13, 2012 at 5:42 am	To Yaabow,waad ka dhacsantahay oo taariikh been ah ayaad meesha la timid,dhulka aad sheegaysid.eaa dhul Darood lakiin raxaweyn inay dagan yihiin oo ay minority ku yihiin dagmooyinka laisuma diidin marka xisiibtaada si fiican uga soo shaqeey
Reply »	Yaabow says:	December 13, 2012 at 8:56 pm	To Jubbalander: Waxaan ku go’aa tirakoob nadiif ah in loo sameeyo dadka degan goboladaan. Laakin iswaalka dhaafa. Hadii la iga bato waxaan raaci meeshi loo bato. Diyaar ma u tihiin Daaroodow Xisaab? Mise dagaalaa rabtiin? Walee Soomali waxay isku heysteen hada unbaan si wacan u fahmey. Nin asagiiba qirtay inuu mardhow soo degey Koonfurta haduu sheegto kawaran lahaanshaheeda?
Hadii Kismanyo laga Yeelo Daarood inuu ku badan yahay Boosaasana Digilmirifle ayaa u badan halaga yeelo??? Teyda anaa iska leh taadana kula lihi Caqlu ma ahan. Ee Caqligu ha shaqeeyo.